Otu esi etinye asụsụ mmemme R na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
October 27, 2021 October 20, 2021 by Jọshụa James
Wụnye dabere maka R
Bubata igodo GPG na ebe nchekwa CRAN
Wụnye Asụsụ Mmemme R
Otu esi etinye ngwugwu R site na CRAN
Otu esi etinye ngwugwu R site na cran2deb4ubuntu
R bụ asụsụ mmemme mepere emepe, yana gburugburu sọftụwia efu maka mgbakọ mgbakọ na mwepụ na ihe ngosi eserese nke R Core Team na ndị na-akwado ya. Ntọala R. A na-eji ewu ewu R n'ọtụtụ ebe n'etiti ndị ọnụ ọgụgụ na ndị na-egwupụta data maka ndị nrụpụta ngwanrọ na nyocha data.
N'ime nkuzi na-esote, ị ga-amụta ka esi etinye R site na iji ebe nchekwa CRAN na Wụnye ngwugwu site na ebe nchekwa R's CRAN ma ọ bụ PPA cran2deb4ubuntu na Ubuntu 20.04.
Nke mbụ, mepee ọnụ (CTRL+ALT+T) ma wụnye ihe ndabere ndị a.
Site na ndabara, R dị na ebe nchekwa Ubuntu 20.04. Agbanyeghị, ọ bụ ihe ochie. A na-atụ aro ka ịwụnye R site na CRAN ebe nchekwa.
Nke mbụ, bubata igodo GPG nke achọrọ iji chọpụta izi ezi nke ngwugwu R.
Ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na mbubata ahụ gara nke ọma:
Na-esote, bubata ebe nchekwa CRAN.
Ozugbo ebubatara, megharịa ndepụta nchekwa APT gị.
Site na ndabere na ebe nchekwa CRAN agbakwunyere ọhụrụ arụnyere, ị nwere ike iwunye asụsụ R site na ime iwu na-esote na ọdụ gị.
Ozugbo echichi mechara, chọpụta ma ọ gara nke ọma site na ịlele ụdị nrụpụta ahụ.
Ugbu a arụnyere R na sistemụ gị, ị nwere ike ịmalite ihe atụ R.
Ọmụmaatụ si n'ọnụ R:
R nwere nnukwu ngwugwu nke ị nwere ike iwunye. Maka nkuzi, na "Txtplot" ngwugwu na-eweghachi eserese ASCII “Ikpe ahịrị, ịsasa nkata, mmanya eserese, na atụmatụ njupụta." A na-etinye nke a site na iji install.ngwugwu(”) iwu na shei ọdụ R.
na "atụmatụ ederede" arụnyere ugbu a, ị nwere ike ịme ule site na ịgbalite ngwugwu ahụ na ọdụ shei R.
Na-esote, egosiri ihe atụ site na iji ihe atụ data wetara site na ngwungwu “datasets” R nwere ọsọ nke ụgbọ ala na anya chọrọ ịkwụsị dabere na data sitere na 1920s:
Site na iwu ntinye a, ị ga-enweta eserese nkata.
Na mgbakwunye, iji nweta enyemaka na ngwugwu arụnyere, ị nwere ike iji iwu na-esonụ.
Dochie "aha ngwugwu" na ngwugwu arụnyere. N'ihe gbasara nkuzi, nke a bụ "txtplot".
Iji wepu ngwugwu, ma ọ bụ "Txtplot" jiri iwu wepụ iwu na ọdụ R shell.
Ka ịpụ na interface ọnụ shei R, jiri ya "q()" iwu.
Ị ga-ahụ ngwa ngwa:
Họrọ nhọrọ gị ịpụ site na ịpị y, n, or c na ịpị "Tinye igodo".
Nhọrọ, ị nwere ike iwunye ihe ndị a PPA cran2deb4ubuntu, PPA maka ngwugwu R sitere na Nlele Ọrụ CRAN wuru megide R 4.0 (na mwepụta ndị na-esote). Rịba ama na PPA a na-arụ ọrụ naanị maka mwepụta LTS dị ka 18.04, 20.04, na 22.04 LTS na-abịanụ mana ejiri ụdị R ọhụrụ wuo ya.
Nke mbụ, wụnye PPA site na iji iwu a.
Ozugbo arụnyere, melite ndepụta nchekwa APT.
Mara, ị nwere ike ịhụ ngwungwu emelitere, kwalite ka okwesịrị.
Kama ịchịkọta ngwugwu R, nke a nwere ike dabara onye nrụpụta, ma ị nwere ike ịwụnye ha dị ka ngwugwu Debian site na PPA. Agbanyeghị, ị ga-adabere na PPA ka edobe ma chekwaa gị.
N'ozuzu, PPA site na Otu "cran2deb4ubuntu Build Team". a maara nke ọma ma nwee ike ịtụkwasị obi.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye R na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa site na iji ebe nchekwa CRAN, nke ị nwere ike ịdọrọ na ngwugwu na mmelite ugboro ugboro.
Otu n'ime akụkụ kachasị mma banyere R mmemme bụ na ọ bụ ngwa ngwa nke obodo na-arụ, nke pụtara na onye ọ bụla nwere ike ịnye nkwalite koodu na ngwugwu ọhụrụ. Nkwekọrịta na gburugburu obodo R bụ ihe akaebe maka ụzọ a iji mepụta ngwa ngwa kpọmkwem site na ịkekọrịta na agbamume ntinye. Ngwá ọrụ a dakọtara n'ofe nyiwe, ma si otú a na-arụ ọrụ n'ọtụtụ sistemụ yana ngwaike.
Na mgbakwunye, ị nwere ike ịhụ ngwungwu R ndị ọzọ na Ngwungwu CRAN dị n'aha.
Categories Ubuntu Tags R, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo